Berlin dia nanova ny seranam-piaramanidina taloha ho tobin'ny vaksinin'ny COVID-19
Home » Vaovaon'ny seranam-piaramanidina » Berlin dia nanova ny seranam-piaramanidina taloha ho tobin'ny vaksinin'ny COVID-19
Nanambara ny tompon'andraikitra amin'ny tanànan'i Berlin fa hovana ny seranam-piaramanidina nakatona ao an-tanàna Covid-19 foibe fanaovana vaksiny afaka manompo olona an'arivony isan'andro.
Ny seranam-piaramanidina Tegel efa ela nijoro tao an-drenivohitra Alemanina izay iray amin'ireo vavahady mankao an-tanàna mandritra ny 60 taona dia nakatona tamin'ny volana Novambra teo.
Ankehitriny, ny famantarana lehibe 'tongasoa' izay mbola mihantona eo am-baravarana dia hanana dikany vaovao tanteraka satria ny Terminal C an'ny Tegel dia efa ho iray amin'ireo foiben-divay enina COVID-19 any Berlin.
"Hanao vaksinin'olona 3,000 ka hatramin'ny 4,000 isan'andro izahay", hoy i Albrecht Broemme, tompon'andraikitra amin'ny tetik'asa fananganana vaksinina any Berlin, miresaka ny fahaizan'ny seranam-piaramanidina ho avy.
Na izany aza, tsy i Tegel irery no ampiasaina amin'ny fanaovana vaksiny satria foibe mitovy amin'izany no kasaina hatsangana ao Tempelhof - seranam-piara-manidina taloha iray hafa nakatona tamin'ny taona 2008 izay efa lasa velodrome, ivon-toeran'ny mpitsoa-ponenana ary tehezan-dranomandry.
Berlin dia manantena ny hahazo jab 900,000 eo ho eo avy amin'ny America's Pfizer sy ireo orinasa BioNTEch any Alemana amin'ny andiany voalohany. Satria misy olona mila mahazo ny jab indroa, dia ampy izany mba hanaovana vaksiny olona 450,000 amin'ny mponina 3.7 tapitrisa mahery.
Nikasa ny hanomboka ny fampielezana vaksiny ny faran'ny taona ny manampahefana ao an-tanàna. "Miomana amin'ny Desambra izahay ho daty mety tranainy indrindra," hoy ny minisitry ny fahasalamana ao Berlin Dilek Kalayci. Nilaza ihany koa izy fa ny fahaiza-mitambatra hubs enina dia ahafahana manao vaksiny olona 20,000 XNUMX isan'andro.
"Ny hevitra ankapobeny dia ny fanaovana vaksinina olona betsaka araka izay azo atao tsirairay avy", hoy i Broemme, 60 taona, ary nanampy fa ny fepetra fiarovana sy ny fandavana ny fiaraha-monina dia mbola zava-dehibe mandritra ny fanaovana vaksiny.
Ny zoma, tranga 22,806 vaovao no voarakitra manerana an'i Alemana, raha 18,633 no notaterina ny Alarobia, hoy ny Robert Koch Institute. Nahita fitomboana indray andro monja ny fahafatesan'ny olona voan'ny coronavirus, 426 ihany koa ny firenena.